माघ १३ देखि १९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डिसी नेपाल , १३ माघ २०७४
साता समग्रमा राम्रो रहनेछ । बोलिको प्रभाव निकै बढनेछ र बोलेरै धेरै काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण र मन आनन्दीत हुनेछ । पहिले गरेका कामहरुको उच्च मुल्याङ्कनले पदलाभ वा पदोन्नति हुन सक्नेछ । बिदेश यात्राको संभावना पनि प्रवल रहेको छ समयले साथ दिनाले लाभको स्तर बढ्नेछ । जीवनसाथीको साथले केही महत्वपूर्ण कामहरु गरिने छन् । मनमा बदलाको वा देखावटको भावना भने आउन नदिनुहोला । कुनै गुप्त योजनामा हुनुहुन्छ भने जोगिएर काम गर्नुहोला ।
मनोबलका हिसाबले यो साता राम्रै बित्नेछ रहनेछ । तापनि संघर्ष भने कडा नै हुनेछ । आफूले आँटेका काम गर्ने तत्पर भईनेछ। कसैले दिएको उपहारले मन प्रशन्न बनाउने छ । बढेको कामको उतरदायीत्व तर आफू भन्दा माथीका सहकर्मीले कुरा काटदा मन कमजोर हुनसक्छ । समयले साथ दिनाले यी सबै अफ्ठ्याराहरुबाट पार पाईनेछ । भोज भतेर र धार्मीक कार्यहरुमा सहभागी हुनाले मनमा तृप्ती अनुभव हुनेछ । लाभ लिनका लागि भने कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । जीवनसाथीले बिस्तारै सोचे अनुरुप साथ दिनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
साताको शुरुमा मन एकतमासको हुनेछ । बैराग्यका वा अनाशक्तीको भावले एकान्तमा बस्न मन लाग्नेछ । कटु बोलिले आफन्तहरु टाढिने संभावना रहेकाले बोल्दा सावधान रहनुहोला । व्यबसायमा अनायास चुनौतिहरु थपिन सक्नेछ भने साझेदारहरु अल्छी बनिदिनाले काम ढिलो संपन्न हुनेछ । आफ्नो इमान्दारीताले यो समयमा बिशेष प्रगती गराउन सक्ने हुनाले आफूलाई द्रिढ राख्न प्रयास गर्नुहोला । व्यावसायमा मन्दी हुनसक्ने भएकाले सजग रहनु होला । परिक्षा दिनेहरुका लागि भने यो समयमा त्यति राम्रो छैन् ।
सोमबार र मंगलबार बाहेक यो साता राम्रै बित्नेछ । कामहरुमा अढ्चनहरु आउने हुनाले आफ्नो ब्यापारीक रणनिती सोही अनुरुप बनाउनु जरुरी छ । साझेदारहरु संग वादविबाद भए पनि ब्यवसाय राम्रै चल्नेछ । सन्तान पक्षबाट यो साता सन्तोष नै हुनेछ। कामको बोझले सन्तानहरु संग वादविबाद बढ्न सक्नेछ । लाभ अपेक्षित रुपमा नै हुनेछ । समय अलि फरक रहेको हुनाले तपाँईले दिएको ऋण नफर्कन सक्ने हुनाले कसैलाई पनि ऋण नदिनुहोला । प्रणयसुख भएतापनि जीवनसाथी संग वादविबाद पनि होला । पेटको विकारले गर्दा खानपानमा अरुचि पैदा हुनसक्ला ।
बुधबार र बिहीबार बाहेक साता उत्साहप्रद नै रहनेछ । काममा सोचे अनुरुप सफलता पाउन सकिनेछ भने साथीभाईको काम गर्न सहयोग गरिनेछ । कामको दायीत्व केही बढ्नेछ । तपाँईको कुरा काटनेहरुलाई जबाफ दिने यो गतिलो समय हो । तपाँई शत्रुहरु आफै परास्त्र हुनेछन्। बिरोधीका चुनौतिहरुलाई सजिलै सामना गर्न सक्नुहुनेछ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कामहरुमा सफलता पाईनेछ । ब्यापार व्यवसाञ बाट राम्रै लाभ हुनेछ तर बढेको खर्चले तनाव हुनसक्ला । मातापिताको स्वास्थ प्रति सचेत हुनुहोला ।
साता राम्रै बित्नेछ । जग्गाजमीन जस्ता स्थिर सम्पतिको काममा केही बिवाद र अफ्ठारोहरु आउन सक्ने हुनाले सचेत रहनुहोला । धैर्य नगुमाई काम गरेमा यो समयमा बचत बढाउन सकिनेछ । मन पुराना कुराहरु तिर जाने र एकोहोरो हुनसक्नेछ । यस्तो स्थितीमा ठुला कुराको निर्णय पुरै कुरा बुझेर मात्रै गर्नुहोला । अति आत्मबिश्बासी हुनबाट जोगाउनु होला । सम्बन्धमा केही खटपट भएपनि तपाँईले संयमतापुर्वक सम्झाएमा दाजुभाईको मद्दतले ठुलै काम गर्न सकिनेछ । आम्दानीको स्थिती राम्रै रहनेछ भने बचत पनि बिस्तारै बढ्नेछ । सन्तानको स्वास्थमा केही समस्या आउनसक्ने हुनाले सचेत रहनुहोला।
साताको शुरुमा आफ्नो कमजोरीको फाईदा अरुले उठाउन सक्ने भएकोले सावधान रहनु होला । मंगलबार देखी समय राम्रो हुँदै जानेछ । अरुसंग व्यबहार गर्दा रुखो बोली नगरे फाईदा हुनेछ । बिग्रन लागेको काम पनि बिस्तारै मिल्दै जाने हुनाले धैर्य गर्नु होला । चोटपटकको संभावना भएकोले सवारी साधन चलाउँदा बिशेष ध्यान दिनुहोला । पारिवारिक खिचलोका बावजुद अचल सम्पति बृद्धि हुनेछ । उतरदायीत्व बढेको अनुभव भएपनि परिवारका सदस्यहरुको जमघटले आनन्द दिनेछ । जीवनसाथीलाई अवसाद वा निराश हुन नदिनुहोला । आफू भन्दा साना मानिससंग विबाद नगरे उनिहरुको सहयोगले ठुलो काम गर्न सक्ने संभावना प्रवल रहेको छ ।
सोमबार र मंगलबार अलि सावधान रहनुहोला । आफ्नो भित्री कुरा थाहा पाएर अरुले तपाँईलाई दुख दिन सक्नेछन। सोचे भन्दा फरक तरिकाले बचत अनायासै बढ्नेछ । पहिले रिसाएका नातेदारहरुले पनि सर(सहयोग गर्ने छन् । आफ्नो पौरख देखाउन सकिने बेला भएको छ । ठुलो योजना पनि द्रिढ भएर लागेमा गर्न अवसर पाईनेछ । लाभका स्रोतहरु मनग्यै बढ्नेछन् । जीवनसाथीको सहयोगले तपाँईलाई काममा ठुलै सहयोग मिल्नेछ । प्रणय सुख पनि राम्रै संग पाईने छ । बढ्को खर्चको लागि बिशेष रणनीति अपनाउनु होला ।
बुधबार सम्म साता राम्रै रहनेछ । तपाँईका समस्या आफैं मिल्दै जानेछन। तापनि लग्नमा रहेको बुधले मनमा प्रसस्त द्वन्दको अनुभव हुनेछ। कटु वचन नबोलेर र धैर्य गरे काममा सफलता पाईनेछ । आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अलिक बढी मेहनत गर्नु पर्नेछ । बिभिन्न अबरोधहरुले गर्दा क्रोधको मात्रा बढ्नेछ । जीवनसाथीले तपाँईले सोचे हनुरुप साथ दिनाले मनमा प्रशन्नता अनुभव हुनेछ । सन्तानहरुलाई बिदेशमा अध्ययनकोलागि गर्नुपर्ने काममा सहजता महशुस हुनेछ । लाभका हिसाबले समय राम्रो नै रहला । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुको कमजोरीको फाईदा उठाउन सकेमा बचत बढनेछ । आँखा तथा मुख, दाँत र पेटको स्वास्थमा खरावी आउन सक्ने हुनाले आफ्नो स्वास्थ प्रति सचेत रहनुहोला ।
सोमबार देखी साता राम्रै बित्नेछ । अरुको कुरा सुनेर काम गर्दा आफ्नो परिश्रम ब्यर्थै गएको अनुभव हुनेछ । खर्चको संतुलन नगरे परिस्थति निकै बिग्रनेछ । पहिला आफूले ऋण लिएका साहूहरुले दिक्क पार्न सक्नेछन् । कामगर्दा बिभिन्न किसिमका र नसोचिएका झन्झटहरु आउनाले काम गर्ने जाँगरमा कमी आउनेछ । कार्यालय कामले बिदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाईन सक्नेछ । प्रणयसुखमा मात्रै ध्यान दिनाले आफ्नो काम बिग्रन सक्नेछ । सबै अफ्ठारोका बावजुद अरुले दिएका उपहारले मन प्रशन्न रहला। आम्दानी बिस्तारै निकै बलियो हुँदै जानेछ ।
साताको शुरुमा अरुको लागि बेकारको चुनौतिको सामना गर्नुपर्ला । बुधबार बाट साता मध्यम रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा थप लगानी गर्नु पर्ने स्थिती आउन सक्ने हुनला आफ्नो तैयारी राम्रोसंग गर्नुहोला । ठेकेदारी तथा निर्माण ब्यबसायीहरुको लागि यो समय बढी उत्साहपूर्ण हुनेछ । साथै बैदेशिक व्यापार गरिरहेका लागि यो समय सुनौलो रहेनेछ । काममा लगनशिलता वा दक्षता अनुरुप सफलता पाईनेछ । काममा पदोन्नतिको अवसर पनि पाईनेछ । तर जीवनसाथीको स्वास्थले तपाँईलाई तनाव दिनेछ । बढेको क्रोधले पारिवारिक वाताबरण बिग्रने हुनाले आफूलाई संयमीत राख्नु होला । दिगो आम्दानीको स्रोत फेला पर्न सक्नेछ भने फजुल खर्च कम गरे बचत बढ्नेछ ।
यो साता राम्रै बित्नेछ । कामको आलोचना बढेको भएतापनि काममा पदोन्नति र प्रशंसा पाईनेछ । नसोचिएको वा वास्ता नगरिएको पुरानो कामको आम्दानी प्राप्त हुनसक्नेछ । बिलासिताका सर(सामानहरुले घरमा रमाईलोपन महशुस हुनेछ। कामको बोझ आगामी दिनहरुमा कम हुँदै जानेछ । श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दिर्घकालिन लाग्न सक्ने समय भएकोले सजग रहनुहोला । बढेको आम्दानीको स्रोतले मनमा आनन्द दिनेछ । आगामी दिनमा मांगलिक कार्यमा व्यस्त भईने संभावना प्रवल रहेकोछ ।